नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु, ‘सहमति’ नतोडिए ओली प्रधानमन्त्री बन्ने — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति, समचार → नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु, ‘सहमति’ नतोडिए ओली प्रधानमन्त्री बन्ने
नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु, ‘सहमति’ नतोडिए ओली प्रधानमन्त्री बन्ने
October 3, 2015४४७ पटक
काठमाडौं, असोज १६ – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठनको लागि आह्वान गरेसँगै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद बैठकमार्फत पदीय जिम्मेवारीबाट अलग रहने घोषणा गर्नुभएको र राष्ट्रपतिबाट पनि सहमतीय सरकारको लागि आह्वान भएपछि दलहरु नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि सबै दलको सहभागिता र समर्थनमा सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकाले दलहरु बहुमतीय प्रक्रियामा नजानेगरी गृहकार्यमा लागेका हुन् । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम सहमतीय सरकारका लागि संसदमा रहेका सबै ३१ वटा दलको अनिवार्य सहमति आवश्यक पर्छ । राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको सात दिने समयसीमा आउँदो असोज २१ गते सकिनेछ । यसबीचमा सहमतीय सरकार बन्न नसके २२ गते बहमतीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
ओलीको सम्भावना कति ?
संविधान निर्माणको क्रममा मुख्य दलहरुबीच नयाँ सरकार एमालेको नेतृत्वमा गठन हुने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । त्यसो त कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन गर्ने क्रममा पनि कांग्रेस र एमालेबीच संविधान निर्माणपछि गठन हुने सरकार एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सहमति भएको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । अनौपचारिक सहमतिमा तलमाथि नभए एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ । त्यसमा कांग्रेस, एकीकृत माओवादीसहित अरु दल पनि सहभागी हुनेछन् ।
एमालेले नेतृत्व पाउँदा स्वभाविक रुपमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ । एमाले नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै भावी प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नाम लिंदै आएका छन् । त्यसो त १६ बुँदे सहमति भएको बेला एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पनि संविधान निर्माणपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । बिहीबार बालुवाटारमा भएको तीन दलको बैठकपछि पनि प्रचण्डले १६ बुँदे सहमति अनुसार नै सरकार गठन हुने भन्दै ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने संकेत गर्नुभएको थियो । यसबीचमा ओलीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि समर्थन जुटाउन राजनीतिक भेटवार्ता तीव्र पार्नुभएको छ ।
कांग्रेसको आफ्नै दाउ
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने संकेत गरेपनि कांग्रेसका नेताहरुले यसबारे प्रष्ट बोलेका छैनन् । १६ बुँदे सहमति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे कुनै सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । कांग्रेसका अरु नेताहरुले पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि सहमति जुटाउने प्रयासमा हुनुुहुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि सहमतीय सरकार आवश्यक पर्ने र यसको लागि आफु नै उपयुक्त हुने उहाँको बुझाई छ । तर कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुने अवस्था आएमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले पनि दावी गर्नेछन् । त्यसैले कोइरालाको नेतृत्वमा फेरि सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेको धेरैको बुझाई छ ।
तर संविधान घोषणासँगै असन्तुष्ट भारतलाई विश्वासमा ल्याउन एमालेको भन्दा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आवश्यक पर्ने एकथरीको विश्लेषण छ । भारतले ओलीलाई समर्थन नगर्ने हुँदा उहाँको भन्दा कांग्रेसकै कोइराला, देउवा या पौडेलको सम्भावना बढी रहेको उनीहरु बताउँछन् । तर संविधान निर्माणको क्रममा र संविधान जारी भैसकेपछिको अवस्थामा पनि ओलीकै चर्चा धेरै छ ।